Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 Monday, November 1, 2021 by Jọshụa James
Wụnye kernel kacha ọhụrụ 5.15
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Linux Kernel 5.15 kacha ọhụrụ na Rocky Linux 8.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa site na ELREPO si oru ngo ELRepo. Nke a nwere kernel kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ụdị LTS nwere mmelite oge niile, yabụ na ịgaghị mkpa ikpokọta kernels wee wụnye ma kwalite site na iji njikwa ngwugwu dnf.
Site na ebe nchekwa na GPG bubata, ị nwere ike ịga n'ihu na ntinye nke ị ga-eji alaka isi ELRepo tinye kernel 5.15.
Iji wụnye kernel nkwado mainline kacha ọhụrụ (NON-LTS):
Ugbu a malitegharịa sistemụ Linux Rocky gị; n'oge windo buut na nhọrọ nke kernels ịhọrọ site na, họrọ kernel 5.15.
Ekele, ị tinyela kernel 5.15 kachasị ọhụrụ na sistemụ Rocky Linux 8 gị.
Iji dobe kernel 5.15 gị ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-eji iwu ume ọhụrụ dnf wepụta mmelite sitere na ebe nchekwa ELRepo dị ka ngwugwu ọ bụla ọzọ na sistemụ Rocky Linux gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye kernel 5.15 kacha ọhụrụ na Linux Rocky gị. Rịba ama, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị ugbu a na-ebugharị na Rocky Linux maka nkwụsi ike kachasị.
Otú ọ dị, maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.15, ị nwere ike gbanwee azụ na kernel gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ịnweta ngwaike ọhụrụ nke Rocky na-akwadoghị. Linux kernel.
Categories Nkume linux Tags Linux kernel, Nkume Linux 8 Mail igodo